ဘယ်လိုနှုတ်ကပတ်တော်၌တစ်နိုင်တဲ့ MACRO ကိုဖန်တီးရန် - စကားလုံး - 2019
Microsoft Word ကိုအတူလုပ်ကိုင်ရိုးရှင်းဖို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသော Create
ကီးဘုတ်ဒါမှမဟုတ်အရပျ၌သူတို့ကိုပြန်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သူတို့ရဲ့ထုတ်ယူသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်တဲ့အခါ laptop ကိုအပေါ်သော့နှင့်အတူပြဿနာများ၏အမှု၌။ ဤဆောင်းပါး၏သင်တန်းမှာတော့ကျနော်တို့ကကီးဘုတ်နဲ့ညာဘက်ထုတ်ခလုတ်ကိုတောင်ပေါ်အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
လက်ပ်တော့ပေါ်ကီးဘုတ်စက်ပစ္စည်း၏မော်ဒယ်နှင့်ထုတ်လုပ်သူပေါ် မူတည်. အလွန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အခြေခံတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအာရုံစိုက်, တဦးတည်းလက်ပ်တော့၏စံနမူနာအစားထိုး၏ဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်းစားပါ။
အထွေထွေများထဲတွင်သင်္ကေတများအပါအဝင်, သော့အများစုစွပ်စွဲခံရနိုင်ပါသည်, "Ctrl +" နှင့် "F1 ကို-F12".
တစ်ကွေးအဆုံးနှင့်အတူပါးလွှာဝက်အူလှည့ပွငျဆငျရလိမ့်မည်။ တစ်ဦးသင့်လျော်သော tool ကို၏မရှိခြင်းအတွက်သေးငယ်တဲ့ဓါးအကျဉ်းချထားနိုင်ပါတယ်။
ပါဝါခလုတ်ကိုသို့မဟုတ် menu ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် "Start" laptop ကိုပိတ်ထားပါ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ကွန်ပျူတာကို turn off လုပ်နည်း
ဝက်အူလှည့အရပျ၌ပူးတွဲနှင့်အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်အကြား key ကိုအနားတစျခုအောက်တွင်ထားရှိရပါမည်, ငါတို့ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီပြသကြပါပြီ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အဓိကဖိအားပျက်ကွက် "အင်တာနာ" ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချ, ဗဟိုကျသငျ့သညျ။
အောင်မြင်သောလျှင်, သင်တစ်ကလစ်နားထောင်မည်နှင့် key ကိုအများကြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်, နှင့်အထက်အစွန်းအောက်ရှိတံခါးကျင်၏အလယ်ပိုင်းဒေသအပေါ်ကိုဆင်းတွန်း။
သင် button ကိုအောအာကာသရှင်းလင်းသွားကြသည်လျှင်, တံခါးကျင်ကိုလည်းဖယ်ရှားပစ်ရမည်။ အထက်ပိုင်ခွင့်ဧရိယာထဲမှာပလပ်စတစ် tab ကို pry တစ်ဝက်အူလှည့၏ချွန်ထက်အဆုံးအသုံးပြုခြင်း။
ဤအပိုင်းကိုရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည် "Shift" နှင့်ပိုကြီးတဲ့အရွယ်အစားရှိခြင်းသော့အားလုံး။ တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်ဖြစ်ပါသည် "အာကာသ"။ အဓိကခြားနားချက်ကျယ်ပြန့်သော့များရရှိနိုင်မှုတဦးတည်းကို attachment ပေမယ့်နှစ်ယောက်ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားစေခြင်းငှါအရာ၏တည်နေရာမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။
သမရိုးကျသော့၏ဖြစ်ရပ်၌ရှိသကဲ့သို့, သော့ချက်၏အောက်ပိုင်းအစွန်အဖျား pry နှင့်တိကျစွာပထမဦးဆုံးတောင်ပေါ်မှာရပ်ဆိုင်းခြင်းများလုပ်နေတဲ့ဝက်အူလှည့သုံးနိုင်သည်။
ယခုကျန်ရှိနေသောစွဲစေခြင်းမှတံခါးသော့ကိုထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့်အထက်သို့ဆွဲပါကဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ သတ္တု stabilizer နှင့်အတူသတိထားပါ။
ကျနော်တို့အစောပိုင်းကဖော်ပြထားပလပ်စတစ်ကလစ်ပ်လုပ်ပြီး Extract ၏လုပ်ငန်းစဉ်။
ကီးဘုတ်ပေါ် "Enter" ဒါကြောင့်ပုံစံအတွက်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ပါတယ်ကြောင်းအတွက်ဒါဟာထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အများဆုံးကိစ္စများတွင်ပါကအတူတူဒီဇိုင်းနေသော၎င်း၏အထိုင်မအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် "Shift" တဦးတည်း stabilizer ။
သော့ "အာကာသ" ၎င်း၏ဒီဇိုင်းအတွက်လက်တော့ကီးဘုတ်ပေါ်မှာအပြည့်အဝရံကွန်ပျူတာဖို့ analogue ကနေနိမ့်ဆုံးကွာခြားချက်ရှိပါတယ်။ က "Shift"နှစ်ဖက်စလုံးတွင်နေရာချရုံနှစ်ခုပူးတွဲဖိုင်ကိုပြန်ကျင်းပခဲ့သည်။
လက်ဝဲသို့မဟုတ်လက်ယာအစွန်းချိတ်မှာ "အင်တာနာ" ချွန်ထက်အစွန်အဖျားဝက်အူလှည့နှင့်တောင်ပေါ်ကသူတို့ကို disconnect ။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်ပလပ်စတစ်ကလစ်အရွယ်အစားကြီးမားဖြစ်ကြပြီးထိုကွောငျ့သော့၏ထုတ်ယူခြင်းကိုအလွန်ရိုးရှင်းသောဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ key ကိုနှင့်အတူပြဿနာများဖြစ်သောကြောင့်၎င်း၏ installation ကို၏စင်မြင့်မှာသာပေါ်ထွန်းနိုင်ပါတယ် "အာကာသ" ဒါဟာနှစ်ဦးကိုတည်ငြိမ်တပ်ဆင်ထားပြီး။
ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့်အစွန်းရောက်သတိပြုဖို့လို၏နောက်ဆက်တွဲတပ်ဆင်ခအတွင်းစွဲစေအလွယ်တကူပျက်စီးနိုင်ပါတယ်ကတည်းက။ ဒီတုန်းပဲခွင့်ပြုခဲ့ပါလျှင်, တစ်ဦးယန္တရားခလုတ်ကိုနှင့်အတူအစားထိုးခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။
အဆိုပါလက်တော့ကနေသီးခြားစီသော့ဝယ်ယူရန်၎င်းတို့အားလုံးကိုသင့်ရဲ့ device ကိုများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်သကဲ့သို့, အတော်လေးပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ခဲ့လျှင်, ယခင်ကသင်ယူသော့မှပြန်လာအစားထိုးသို့မဟုတ်၏ရရှိမှု၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ကျနော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များပြင်ဆင်ကြပြီ။
ပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းတောင်ပေါ်မှာ Turn နှင့်သော့ကို slot က၏အောက်ဆုံးမှာ "နှုတ်ခမ်းမွေး" ၏ကျဉ်းမြောင်းသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု secure ။
မှန်ကန်သောအနေအထားတွင်ထိပ်, စာနယ်ဇင်းသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်မည်သို့နှိပ်ဖို့။ သငျသညျကလစ်၏လေ့လာသင်ယူမည်အောင်မြင်သောတပ်ဆင်ခ။
စွဲစေကျယ်ပြန့်သော့၏ဖြစ်ရပ်အတွက်သင်သမားရိုးကျနှင့်ဝသကဲ့သို့အတိအကျတူညီလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်မဟုတ်တဦးတည်း၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့နှစ်ခုညှပ်။
သတ္တုအကြံပေးချက်များ stabilizer အတွက်တွင်း Threading ။
အဖြစ်မတိုင်မီမူလအနေအထားမှတံခါးသော့ကိုပြန်လာကြောင့်နှိပ်လိုက်ရင်တိုင်အောင်တွန်း။ ဒီနေရာတွင်ကအများစုနဲ့ attachment ပါကဒေသတွင်းမဟုတ်ဘဲအလယ်ဗဟိုတွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်အောင်ဖိအားဖြန့်ဝေရန်လိုအပ်ပေသည်။
တောင်ပေါ်နှင့်အတူ "များစွာ" အခြားအသော့ကို install သည့်အခါကဲ့သို့တူညီသောအဆင့်များလုပ်ပေးရန်။
Install "အာကာသ" ကီးဘုတ်ပေါ် stabilizer ကျဉ်းမြောင်းမှသကဲ့သို့ထိပ်မှဆင်းညွှန်ကြားခဲ့သည်။
အထက်တွင်း၌တစ်ဦး stabilizer ထည့်ပါအဖြစ်ကျနော်တို့ကိုပြသခဲ့ကြသည်။
အခုတော့တစ်ဦးအောင်မြင်သော installation ကိုပုံဆောင်တဲ့, ကလစ်လာပြီမှနှစ်ကြိမ် key ကိုနှိပ်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။
ထို့ပြင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြကြသေးငယ်တဲ့သော့ကီးဘုတ်ပေါ်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သမားရိုးကျအပြည့်အဝအလားတူဖယ်ရှားလုပ်ပြီး install ၎င်းတို့၏ဖြစ်စဉ်ကို။
ကြောင့်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖေါ်ပြခြင်း, သင်အလွယ်တကူနဲ့ Laptop ရဲ့ကီးဘုတ်ပေါ်က key ကိုဖယ်ရှားတပ်ဆင်နိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ Laptop ကိုအပေါ်ပူးတွဲဆောင်းပါးထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့တဦးတည်းအနေဖြင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားလျှင်, မှတ်ချက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ရန်သေချာစေပါ။
ဗီဒီယို Watch: COMO DESCARGAR OFFICE 2019 EN ESPAÑOL FULL GRATIS 32 Y 64 BITS -Activado- (နိုဝင်ဘာလ 2019).